Chii The Best Book Stores In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > Chii The Best Book Stores In Europe
Kune zvikonzero zvakawanda nei vanhu vanoda kufamba. Mumwe ndivo unogona kunzwa kazhinji ndiyo kukwanisa kuva itsva uye zvinofadza zvakaitika. Chii chinoita vaifamba tsvarakadenga ndechokuti unhu hwakasiyana kuchaita kuvhundutswa nezvinhu zvakasiyana. Adrenaline junkies kutora basa pazororo, kutsvaka kunakidzwa ezvinhu zvishoma ngozi. Foodies vanoshanyira nzvimbo itsva achifarira ndiro yavo inonakidza siyana itsva. Uye nokuti bookworms pakati vafambi, mumaraibhurari uye bhuku muzvitoro unogona kuva nzvimbo yakaisvonaka munyika. Kana uri achipfuura Europe uye kutsvaka zvakanaka bhuku muzvitoro mu Europe kunoshanyira nechitima, tine mazano mashomanana kwamuri:
France Best Book Stores – Shakespeare & kambani, Paris
France ari nyika inofadza, uye Paris ndiro dzayo yakakurumbira rwendo. Kana unyanzvi marudzi kufunga Paris, Notre Dame anouya mupfungwa, pamwe zvitubu yakanaka uye Cherry miti ruva. Zviri chaiwo maonero uchawana kana iwe kushanyira Shakespeare & kambani, along with fantastic ambiance of books inside.
Vanyori zhinji (kusanganisira Ernest Hemingway uye Voltaire) zvakapedza nguva kunyora ichi rechi17 chivakwa remakore. The girl rinoumbwa kare echiShinto uye mabhuku, ukapisa murwi kuva vazhinji dukuduku dzimba uye nooks. Bhuku chitoro sprawls pamusoro pamapuriro maviri, uye kubva kunze sokuti duku zvikuru pane zviri. Shakespeare & Company uyewo inoshanyirwa zviitiko manheru uye munyori kuverengwa, riri chinhu hapana anoda mabhuku anofanira kurasikirwa.
Venice ndeimwe yenzvimbo da achitarisa maguta Itari, uye zvakare kumusha imwe yakakurumbira yakanaka bhuku zvitoro mu Europe. Libreria Acqua Alta ichinyatsozivikanwa nekuchengeta mabhuku bathtubs uye kunyange Gondola. Kune dzimwe okuchengetera nzvimbo zvakare, dzakadai migomo uye nezvimwewo zvinoyangarara midziyo. Zvinoitawo ine pamasitepisi akaita zvachose mabhuku ekare pamusoro wayo musana pavharanda.
Wayo wakanaka mukati, Raibhurari iri High Water Venice urwu inokosha kushanya uye achafara chero bhuku anoda. Kana uchishuvira kuve nacho pachako uye kurasika mukati, bheji zvaunogona chinoenda ikoko Pazvakangomutambudza chinotanga mangwanani.
Maastricht muNetherlands Varege pamusoro ose nzvimbo chido mazita. zvisinei, zvinofanira kuva kana uchida bhuku zvitoro uye mabhuku zvikurukuru. Republic kana Selexyz Dominican Church muguta iri 700 egore mamiriro yakavakwa muna akasiyana okuruka Gothic akitekicha.
Hazvina mukare kunze uye minimalist mukati. Dominicanen ari kufashukirawo vazhinji kwemazita kuti achafara chero bhuku anoda mwoyo. Unogona kubata munhu kofi ari padivi Datenroku paunenge uchiverenga bhuku. Nerumwe, unogona kunakidzwa tarenda maonero kubva pamusoro pauriri.
kuka & bhuku, kweBrussels, Woluwe-Saint-Lambert
kuka & Book chinonakidza bhuku chitoro uye resitorendi riri Woluwe-Saint-Lambert, Bherujiyamu. Nepo vakawanda yakanakisisa bhuku zvitoro kupa vamwe chikafu uye zvokunwa, kuka & Book anotora pfungwa zvishoma mberi. Kunoitawo kuti vagare pasi kuti kudya wakakomberedzwa mabhuku akasiyana-siyana. Kuti zvinoita chaizvo nzvimbo avo vanoda kuva mabhuku zvakanaka chikafu zvakanaka. Chii chimwe, Hakusi chinhu unogona kuwana ose zuva.
Ready kushanyira dzimwe yakanaka bhuku zvitoro mu Europe? Unogona kuenda nechitima Paris uye Venice, uyewo kuNetherlands uye Belgium. Book matikiti zvenyu mangwanani wotanga kuronga bhuku rako zvakavanakira uri inotevera pazororo!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/charming-book-stores-europe/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Ave kuti / ja kana / TR uye mimwe mitauro.
#bhuku #mabhuku #bookstore #bookstores #traveleurope
Mutsva Complete Guide To Italy By Train